Ndị na -emepụta ngwaahịa na ndị na -ebubata ngwaahịa - China Products Factory
Nubway ọhụrụ imewe 1-10Hz mgbanwe q-mgba ọkụ ...
Contouring Machine Maka Ahịa Emsculpt Machine
HI-EMT (onye na-enye ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ dị elu) ume iji kwalite uru ahụ ka ha wee nwee ike ịkpa oke na ike ha kacha elu .Nke a na-eme ka ahụ ike mgbatị ahụ ike na-eduga n'ịrụgharị na nkwalite akwara, yana oke abụba na-ere ọkụ. Usoro Emsculpt ọhụrụ bụ usoro na-adịghị emerụ ahụ, nke na-enweghị mgbu nke nwere ike ịda ụda ma bulie isi ya na-enweghị mkpa maka mmega ahụ gabigara ókè ma ọ bụ ịwa ahụ mwakpo.
Emsculpt Muscle Stimulation Aircooling System Neo Rf Machine 4 igwe eji eme ihe
Ngwa Nubway Emsculpt Neo Contourin Neo Machine Ahịa
Emsculpt IV otu gbakwunyere bụ teknụzụ kachasị ọhụrụ emebere ma debe otu ọfịs pịa teknụzụ kachasị elu kachasị elu na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya maka ndị nwe azụmaahịa.
emsculpt IV igwe ọgbọ nke anọ na-eji teknụzụ na-adịghị emerụ ahụ site na iji HI-EMT (onye na-enye ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ dị elu) iji kwalite uru ahụ ka ha wee nwee nkwekọrịta na oke ike na ike ha .Nke a na-eme ka ahụ ike mgbatị ahụ ike na-eduga n'ịhazigharị na nkwalite. nke uru ahụ, yana oke abụba na -ere ọkụ.
Usoro Emsculpt ọhụrụ bụ usoro na-adịghị emerụ ahụ, nke na-enweghị mgbu nke nwere ike ịda ụda ma bulie isi ya na-enweghị mkpa maka mmega ahụ gabigara ókè ma ọ bụ ịwa ahụ mwakpo.
Ọkachamara Emsculpt Neo Machine Zụrụ igwe Neo maka ọrịre
Echiche ọhụrụ nke ịbelata abụba na -ebelata abụba. ezigbo ihe ọ pụtara '' Slimming & abụba mbelata '' bụ ifelata abụba ma belata abụba anụ ahụ, ọ bụghị naanị iji belata ibu. Ọdịmma dị elu “na -ebelata abụba na -esighị ike” bụ ahịrị akwara na akụkụ ahụ nwere mmetụta ume ike, na -ezipụ ịma mma ahụike.
Tec Cooling Igwe Na -adịgide Adịgide Akụrụngwa Igwe eji arụ ọrụ ntutu 808Nm Diode Laser Machine
808Nm Diode Laser Hair Removal Machine bụ ihe ama ama n'ahịa. Ngwa 808nm diode laser ntutu: Kachasị mma maka iwepụ ntutu ngwa ngwa, enweghị nchekwa, enweghị mgbu na -adịgide adịgide na mpaghara dịka ihu, ogwe aka, akpa aka, obi, azụ, bikini, ụkwụ na wdg. ma ọ bụrụ na ị nwere ọkụ, gbara ọchịchịrị ma ọ bụ akpụkpọ anụ gbara ọchịchịrị, isi ma ọ bụ ntutu dị mma, usoro iwepụ ntutu anyị na -enweta nsonaazụ kacha mma.
Alxander Diode Laser na -enwu ọkụ nke na -ewepụ igwe anaghị agba nchara
Mwepụ ntutu bụ igwe anaghị ahụ maka onwe ya nke na -anọchite anya igwe mwepụ ntutu laser kacha elu n'ụwa. N'ọhịa epilators, naanị ị ga -ahụ ngwaọrụ a pụrụ iche na nke ọhụrụ. Ọ nwere ogologo nrịgo pụrụ iche nke 808 nanometers nke a na -ewere dị ka ọkọlọtọ kachasị mma maka igwe mwepụ ntutu. Ọ na -egosipụta teknụzụ jụrụ oyi nke ọma (TEC) nke na -ekwe nkwa usoro ọgwụgwọ dị mma, dị nchebe ma dị irè.
808Nm Diode Laser Skin Rejuvenation Beauty Machine bụ nke a nabatara nke ọma. Laser nwere ike banye n'ime akwa dermis na anụ ahụ adipose subcutaneous wee rụọ ọrụ na ntutu ntutu dị omimi n'akụkụ dị iche iche iji wepu ntutu miri emi n'akụkụ ọ bụla nke ahụ mmadụ. Ọ gaghị emebi epidermis, nke bụ nnukwu uru nke iwepụ ntutu laser. Iwepụ ntutu laser na -eji ụkpụrụ "mmetụta photothermal na -ahọrọ" nke laser. A na -eji laser emeziri ka ogologo ebili mmiri ụfọdụ gafere na epidermis wee kpoo ntutu ntutu ozugbo. Melanin nke ntutu ntutu na ntutu isi na -amịkọrọ ike ọkụ nke ọma, nsonaazụ ọkụ na -esite na -eme necrosis follicle ntutu na ntutu agaghịzi eto. Mwepụ ntutu isi laser bụ nke kacha ebibi ntutu ntutu ma nweta nsonaazụ iwepụ ntutu.
Ọnụ ahịa ihu ụmụ nwanyị kacha mma N'okpuru ntutu iwepụ ntutu laser
N'okpuru igwe mwepụ ntutu ntutu laser bụ usoro ahụike nke na -eji nnukwu ọkụ (laser) iji kpochapụ ntutu na -achọghị. N'oge usoro iwepụ ntutu, laser na -ewepụta ọkụ nke ụcha (melanin) na -etinye na ntutu. A na -agbanwe ọkụ a ka ọ bụrụ ike ọkụ, nke na -emebi ntutu ntutu ma n'aka nke ya, na -enyere aka belata uto ntutu. Ọ bụ usoro igbochi ntutu gị ka ọ na -eto site n'ikpughere mgbọrọgwụ ya na oke ọkụ ọkụ laser nke na -emebi ntutu isi.
Igwe mwepụ ntutu Laser ọkachamara na -anabata 808 nm, nke kachasị dị irè na ntutu melanocytes na -enweghị mmerụ ahụ gbara ya gburugburu. Ogwe ntutu na ntutu ntutu na melanin nwere ike banye ọkụ ọkụ laser, wee gbanwee ka ọ bụrụ okpomọkụ, si otú a na -abawanye okpomọkụ nke ntutu ntutu. Mgbe okpomoku na -ebuli elu nke ukwuu iji mebie usoro nke ntutu isi, nke na -apụ n'anya ka oge nke usoro usoro anụ ahụ nke ntutu isi wee mezuo ebumnuche iwepụ ntutu na -adịgide adịgide.
Igwe Laser kacha mma bụ usoro ahụike na -eji nnukwu ọkụ (laser) iji kpochapụ ntutu na -achọghị. N'oge usoro iwepụ ntutu, laser na -ewepụta ọkụ nke ụcha (melanin) na -etinye na ntutu. A na -agbanwe ọkụ a ka ọ bụrụ ike ọkụ, nke na -emebi ntutu ntutu ma n'aka nke ya, na -enyere aka belata uto ntutu. Ọ bụ usoro igbochi ntutu gị ka ọ na -eto site n'ikpughere mgbọrọgwụ ya na oke ọkụ ọkụ laser nke na -emebi ntutu isi.
123456 Ọzọ> >> Peeji 1 /27